Articles (kawl lai) | Siyin Chin Baptist Church
Articles (kawl lai)
PATHIAN OMPUINA (Emmanuel)
Posted by thawngno ⋅ December 27, 2011 ⋅ Leaveacomment
By Rev. Dr. Cin Khua Zam (Yuzana, Yangon) Pathian ompuina ci thu bulphu a, 2010 kum, Yuzana Sizang Innkuante kum sawm cin lungdam vawt in, ka thuhilna hi a,akuama po tha nga mama ung hong ci ciang,ataangzai zaw tu lametna taw kong at ahi hi.
Posted by thawngno ⋅ June 7, 2011 ⋅ Leaveacomment
သူများအပြစ်မည်ကဲ့သို့ဖြေလွှတ်နိုင်မည်နည်း? မည်သည့်အတွက်ကြောင့် အပြစ်ပြုမိသည်ကို စုံစမ်းပြီး သိရန်ကြိုးစားပါ။ သူများသည် မိမိအပေါ်မှာ မကောင်းကြံစည်သည်ဟု ယူဆသောအမှုမြောက်များစွာကို အကြောင်းရင်းလေ့လာပါက အားလုံး မမှန်ကန်ပါ။ သူပြစ်မှားမိသည်ကိုပင် သတိမထားမိပါ။ အများအားဖြင့် နားလည်မလွှဲခြင်း (Mis-understanding) များဖြစ်ပြီး၊ မျက်နှာချင်ဆိုင်ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ပါက အပြစ်မလွှတ်နိုင်ရန် မရှိပါ။ သို့ရာတွင် လူသားများသည် မျက်နှာချင်းဆိုင် ညှိနှိုင်းခြင်းမရှိ၊ ကြာလာ၍ ရင့်လာသောအခါ အပြစ်မလွှတ်နိုင်သည်အထိ ကြီးထွားလာတတ်သည်။ သို့ရာတွင် အကြောင်းရင်းကိုလေ့လာ၍ ရှင်းရှင်းလင်းလင်း သိရှိပါက တစ်ဖက်သား၏ အားနည်းချက်များကို ပေါ်လွင်ပြီး၊ အပြစ်လွှတ်ရုံသာမက သနားခြင်းစိတ်ပင်လျှင်ပေါက်ဖွါးလာမည်ဖြစ်သည်။
PDF Version, Burmese font nei ngawlte atu All that we are is the result of what we have thought: it is founded on our thoughts, it is made up of our thoughts. Ifaman speaks or acts withapure thought, happiness follows him, likeashadow that never leaves him.” Gautama Buddha, Dhammapada … Continue reading →
PDF Version (Burmese font nei ngawlte atu) သူတစ်ပါးသည် ကျွန်ုပ်တို့ကို ပြစ်မှားသောအပြစ်များကို အကျွန်ုပ်တို့သည်လွှတ်သကဲ့သို့ အကျွန်ုပ်တို့၏အပြစ်များ ကိုလွှတ်တော်မူပါ။ ပုထုဇဉ် လူသားများအသက်ရှင်ရာ၌ ငြိမ်သက် ပျော်ရွှင်မှု ရရှိရန် အတွက် ၀လင်စွာ စားရရုံသာမဟုတ်ပဲ အချင်းချင်း ဆက်သွယ်မှု ပြေလည်မှ အသက်ရှင်ခြင်းသည် အဓိပ္ပါယ်ရှိပါသည်။ ကမ္ဘာ၌ ၀လင်စွာစားသုံးနိုင်သော ထိပ်ဆုံးနိုင်ငံမှာ ဆွီဒင် နိုင်ငံဖြစ်သလို လူသတ်မှုအများဆုံးနိုင်ငံမှာလည်း ယင်းနိုင်ငံပင်ဖြစ်သည်ဟု ဆိုပါသည်။ ထမင်းဝလင်စွာ စားရရုံနှင့် လူ၏ နေ့စဉ် အသက်တာ၌ ပျော်ရွှင်မှု မပေးနိုင်ကြောင်း သိသာထင်ရှားပါသည်။ သာယာ ပျော်ရွှင်ဘွယ်ကောင်းသော ကမ္ဘာဖြစ်ပေါ်လာရန် တစ်ယောက်နှင့် တစ်ယောက် အပြစ်များကို မမှတ်မထား၊ ကလဲ့စားချေမှု မပြုပဲ ရန်မဟုတ်၊ ခွင့်လွှတ်တတ်ကြရန် လိုအပ်ပါသည်။
PDF Readers Click here မြေကြီးပေါ်၌လည်း အလိုတော်ပြည့်စုံပါစေသော ယုဒလူမျိုးများ၏ စာရေးနည်း ဟန်ဖြင့် ဖေါ်ပြပြီးသော အချက်အပေါ်ပြန်ဆိုခြင်းသာဖြစ်ပြီး “နိုင်ငံတော် တည်ထောင်ပါစေသော” အကြောင်းအရာနှင့် မထူးမခြား အတူတူပင်ဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင်၏ နိုင်ငံတော်သည် ဤကမ္ဘာ၌ လူသားများက တည်ထောင်မှဖြစ်နိုင်မည်သာ။ ဤသို့ဆိုသော် လူသားများသည် လက်ပိုက်ပြီးနေရန် ဆိုလိုခြင်းမဟုတ်ပါ။ ငါ၏လုပ်ဆောင်ချက်ဖြင့် ဤကမ္ဘာ၌ အဘယ်အရာမျှ ဖြစ်ပေါ်လာမည်မဟုတ်၊ ဖြစ်ချင်တာဖြစ်ပါစေ ဆိုပြီး ဂရုမစိုက်ဘဲ နေရန် မဟုတ်ပါ။ အရာရာသည် တင်ကြိုသတ်မှတ်ပြီးသားဖြစ် ၍၊ ပြုပြင်နိုင်သော အခွင့် မရှိဟု ခံယူခြင်းကို (Fatalism) ဟုခေါ်သည်။
PDF Readers click here ဆုတောင်းခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍ သခင်ယေရှု ၀မ်းနည်းခြင်းအကြောင်းတစ်ရပ်မှာ ဘုရားသခင်က လူ့အလိုကို လိုက်စေလိုခြင်းအကြောင်းဖြစ်သည်။ အခြားဘာသာ ၀င်များသည် ဘုရားသခင်အားသူတို့အလိုကို လိုက်စေရန် သွေးဆောင်၊ ဆွဲဆောင်၊ ခြိမ်းခြောက်တတ်သည်။ ဤကဲ့သို့ လုပ်နိုင်ပါက ဘုရားသခင်သည် လူတို့၏ အလိုအတိုင်း လိုက်လျှောက်သည်ဟုယုံသည်။ သို့ရာတွင် ခရစ်ယာန်များ ကိုးကွယ်သော ဘုရားသခင်သည် လူ့အလိုကို လိုက်လျှောက်တော်မမူ၊ ဤကဲ့သို့ ကြိုးစားရန်လည်း မသင့်ဟုသွန်သင်လိုခြင်း ဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင်အား လူ့အလိုကို လိုက်လျှောက်ရန်လည်း ဆွဲဆောင်ရန် မလိုအပ်ပါ။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ဘုရားသခင်သည် လူသားများအတွက် အကောင်းဆုံးသိနှင့်ပြီးသားဖြစ်သည်။